Qoorta laf-dhabarku waa xubin muhiim u ah dhaqdhaqaaqa jirka bina-aadamka. Si dhib leh ayaan u shaqeyn karnaa oo u nasan karnaa la'aanteena maalin kasta. Maaddaama uu yahay mid ka mid ah kala-goysyada muhiimka ah ee jidhka bini'aadamka, garabka ayaa had iyo jeer dhaqaaqa Caafimaadkiisu wuxuu si toos ah u go'aamiyaa tayada nolosha iyo tayada nolosha qofka. Adoo adeegsanaya Sho ...
Dayrta waa xilli goosasho wanaagsan. Sidoo kale waa xilli sare oo cuduro. Cuduro badan ayaa u nugul soo noqoshada xilliga dayrta. Sida ay sheegeen khubarada cilmu-nafsiga, saamaynta cimilada iyo arrimo kale awgood, dhacdooyinka niyad-jabka iyo cudurada kale ee maskaxda xilliga dayrta aad ayey u kordheen. T ...
Saaxiibbada jecel inay ciyaaraan tennis, badminton iyo tennis miiska waxay dhaawici doonaan xusullada markay ciyaarayaan kubbadda, gaar ahaan markay gadaal u ciyaarayaan. Khubarada ayaa noo sheegaya tan waxaa badanaa loo yaqaan "xusulka teniska". Iyo xusulka tennis-ka inta badan wuxuu ku jiraa daqiiqada kubbadda lagu garaacayo, kala-goysyada curcurka ma ahan b ...
Qalabka difaaca jirka
Habka jir dhiska, way noo fududahay inaan sababi karno muruq muruq iyo muruq muruq sababtoo ah jimicsi xad dhaaf ah. Marka murqaha muruqyada iyo muruqyada ay soo baxaan, waxaan dareemeynaa xanuun. In kasta oo jimicsigu u wanaagsan yahay caafimaadkeenna, haddana waxa loola jeedaa jimicsi habboon. Haddii aynaan taxaddar habboon ka qaadin hannaanka ...
Xilliga ku-meel-gaadhka ah ee dayrta iyo jiilaalka sannad kasta, cimilada qalalan, ayaa ah dhacdooyinka sare ee shilalka dabka. Way fududahay in dab la kiciyo oo khatar la geliyo badbaadada dadka iyo naftooda. 20-kii Febraayo, waxaan abaabulnay shaqaalaheenna si ay u fuliyaan tababarka aqoonta dabka. F ...
Ku saabsan ilaalinta dhexda
Difaaca dhexda ayaa door muhiim ah ka ciyaara ka hortagga dhaawacyada isboortiga iyo hagaajinta waxqabadka cayaaraha. Dhexda, oo ah barta muhiimka ah ee cayaaraha badan, waxay naga mudan tahay fiiro gaar ah. Jimicsiga jirdhiska iyo isboortiga, dhexda waxaa lagu soo rogay culeys weyn, waxayna ku lug leedahay traini ...
Doorka barkinta qoorta iyo sida loo yareeyo xanuunka qoorta
Shaqaalaha casriga ah ee qoorta-cad ayaa madaxooda hoos u dhigaya muddo dheer, taas oo sababi doonta muruqyada ka dambeeya qoorta inay si xad-dhaaf ah u daalaan, waxayna riixi doonaan dhammaan culeyska lafaha laf-dhabarka ilmo-galeenka. Waqti dheer kadib, waxay sababi doontaa maqaarka afka ilmo-galeenka inuu soo baxo, oo sababa ...
7 astaamood oo ah ilaalinta dhexda dumarka
Taageerada Lumbar ayaa aad ugu sii badan dumarka fadhiga badan, maxaa yeelay dumarka qaba caadada, uurka, dhalmada, naas nuujinta iyo astaamaha kale ee jir ahaaneed, waxayna leedahay astaamaha cudurada haweenka ku dhaca, sidaa darteed xanuunka dhabarka hoose waa calaamadaha caanka ah. Marka sidee loo ilaalin karaa dhexda ...
Jimicsi subax ah
Dadka qaar waxay u maleynayaan in jimicsiga subaxdii la sameeyo sida ugu dhaqsaha badan, sidaa darteed waxay jecel yihiin inay u baxaan jimicsi kahor subaxa hore ee subaxa. Xaqiiqdii, ma aha cilmi. Habeen kadib, sunta wasakhda ah wax badan ayey ku urursataa hawada, neefsashada hawadan wasakheysan waxay saameyn xun ku yeelan doontaa jirka aadanaha ...
Isboorti macquul ah
Bulshada casriga ah, xawaaraha nolosha iyo shaqadu waa mid aad u dhakhso badan, jidhka bina aadamkuna wuxuu ku jiraa xaalad culeys xad dhaaf ah muddo dheer. Horaa loo yidhi, "Noloshu waxay ku jirtaa jimicsi." Isboortiga habboon wuxuu door wanaagsan ka ciyaaraa horumarinta caafimaadka aadanaha, isboortiga jiilaalka ayaa sidoo kale jimicsi kara awoodda dadka ...
Isticmaal waardiye curcurka ku habboon
Curcuradu waa qeybta ugu firfircoon jirkeena, marka fursada dhaawac waa mid aad u sareysa. Xirashada Bracers-ka ayaa ka ilaalin kara murgacashada ama soo kabashada degdegga ah. Brace Brace waxay noqotay mid ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka u ah dadka isboortiga iyo curcurka curcurka waa inuusan faragelin howlaha caadiga ah ee ...
Ka ilaali jilbahaaga marka aad ciyaareyso isboorti
Isboortiga casriga ah, isticmaalka jilibka waa mid aad u ballaaran. Jilibku maahan oo keliya qayb aad muhiim ugu ah isboortiga, laakiin sidoo kale waa qayb aad u nugul. Sidoo kale waa qayb xanuun badan oo tartiib tartiib tartiib tartiib ah markii la dhaawacmo, xitaa dadka qaar waxay lahaan doonaan xanuun caajis ah maalmaha roobka iyo daruuraha. Jilbaha Isboortiga ...